सुरु भयो मौन अवधि, के गर्न हुन्छ ? के गर्न हुँदैन ? — SuchanaKendra.Com
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को मौन अवधि सुरु भएको छ । मतदानको ४८ घण्टा अघिदेखि निर्वाचनको मौन अवधि लागु हुन्छ ।
मौन अवधि मतदान नसकिएसम्म जारी रहन्छ । मौन अवधिमा उम्मेदवार र उनीहरुको पक्षमा प्रचारप्रचार र अरु क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता अनुसार मौन अवधिमा राजनीतिक दलहरुले प्रचारप्रसारका काम गर्न पाउँदैनन् । दलहरुलाई छलफल, अन्तरक्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी लगायत कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न रोक लगाइएको हुन्छ ।
मंगलबार अपरान्ह निर्वाचन आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले ठट्यौली शैलीमा मौन अवधिमा उम्मेदवार र मतदातालाई बन्देज नलागेको क्रियाकलापको विवरण सुनाए । ‘हरेक उम्मेदवारले मनमनै मैले चुनाव जित्छु कि जित्दिनँ ? मैले कस्तो प्रचारप्रसार गरेछु भनेर स्मरण र समीक्षा गर्न पाउनेछन्’ उनले भने, ‘त्यो बाहेक प्रचारप्रसार र अरु क्रियाकलाप गर्न नपाउने ।’
मौन अवधि संवेदनशील रहने उल्लेख गर्दै उनले मतदातालाई पनि सजगता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । ‘प्रत्येक मतदाता परिचयपत्र लिन जान पाउने । त्यही नै हामीले मतदाता शिक्षा भनेर स्वयंसेवक र कर्मचारीबाट मतदाता शिक्षाको बन्दोबस्त गरेका छौं’ उनले भने, ‘कसरी मतदान गर्ने, स्वस्तिक कसरी लगाउने ? मतपत्र कसरी पट्याउने भनेर सिक्न जान पाउने ।’
मतदानको समयमा प्रतिस्पर्धीहरुबीच विवाद वा झडप नहोस् र कुनै अप्रिय घटनाले मतदाता आतंकित नहोउन् भनेर मौन अवधि सुरु गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ ।
शान्त वातावरणमा निर्वाचन गर्न, अनि उम्मेदवारबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउन मौन अवधिको व्यवस्था गर्ने प्रचलन छ । मौन अवधि सुरु भएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारहरुलाई मतदान केन्द्रको ३ सय मिटर वरपर राखिएका प्रचारप्रसार सामग्री हटाउन लगाउँछ । निर्वाचन आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउनुपर्ने, कुनै पनि विधि, प्रकृया वा माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुने ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले पत्रकार सम्मेलनमा मौन अवधिभन्दा अगाडि राखिएका भौतिक प्रचार सामग्री समेत हटाइदिन राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुलाई आग्रह गरे । उनले सामाजिक सञ्जालमा पनि मौन अवधि सुरु भएपछि प्रचारप्रसारका सामग्री नराख्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘(सामाजिक सञ्जालका) कुनै पनि खातामा सामग्री नराखिदिनुहोला । छ भने झिकिदिनुहोला, पूर्ववत् अवस्थामा गइदिनुहोला ।’
निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम लगायत अन्य उपायबाट राजनीतिक दल, उम्मेदवारको पक्ष–विपक्षमा सन्देश, सूचना र प्रचारप्रसार सामग्री राख्न र सेयर गर्न समेत रोक लगाएको छ । आचारसंहिता पालना र मौन अवधिमा पालनाको अनुगमन गर्न आयोगले १९ जिल्लामा सहसचिवको नेतृत्वमा टोली पठाएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलका अनुसार, उनीहरुले प्रचारप्रसार मौन अवधि र मतगणनाको समेत अनुगमन गरी निर्वाचन आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनेछन् ।
मौन अवधिमा प्रचारप्रसारका सबै गतिविधि शान्त हुने भएकाले मतदानको वातावरण बन्छ र मतदाताहरु उत्साहित भएर मतदान गर्छन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । यदि शून्य अवधिको व्यवस्था नराख्ने हो र मतदानको अघिल्लो दिनसम्म पनि प्रचारप्रचारको छुट हुने हो भने उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरुले मतदातालाई प्रभावित पार्ने जोखिम रहन्छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मौन अवधिमा स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्न मतदाताहरुलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘कुन उम्मेदवारले यो बीचमा के के भने ? उनीहरुको अनुहार सम्झिने । चिन्ह सम्झिने । त्यो सबै सम्झेर आफ्नो विवेकको ऐनामा त्यसलाई हेर्ने । राम्रो मान्छेलाई आफ्नो मत प्रकट गर्ने । मतपेटिकामा मत हाल्ने, आउने । गर्न पाउने भनेका यिनै काम हुन् ।’